Chandoutis Raoera, raha nanontaniana mikasika ny fipetrak’izy io manoloana ny fifampitifirana nisy tetsy Ampefiloha ka nitifirana lohan’olona efa lavo tamin’ny tany ny faran’ny herinandro teo. Mbola hita ho misy andraikitra tsy efan’ny fitondram-panjakana, hoy izy, taratra ao anatin’io. Efa hita ny ezaka ataon’ny fitondrana saingy noho ilay tsy fananan’asa miteraka ny elanelana be loatra dia mirongatra ny tsy fandriampahalemana. Mila hamafisina ny politika sy fampiharana ny fampananan’asa eto Madagasikara. Fotoana toy izao indrindra no tena tokony hampanjakana ny fanajana zon’olombelona. Olona efa lavo amin’ny tany kosa ve, hoy izy, dia mbola vonoina indray? Sao sanatria vavolombelona manahirana? Marina fa mihatra aman’aina ny asan’ny mpitandro filaminana ary eo indrindra, hoy ny fanazavany, no tokony hijerena ny fipetraky ny andininy faha-3 ao amin’ny fanambarana iraisampirenena momba ny zon’olombelona dia ny zo hiaina izany.